Kolikoly sy trafika harena voajanahary “Malefaka amin’ny fanjakana ny mpamatsy vola”, hoy ny AVG | NewsMada
Kolikoly sy trafika harena voajanahary “Malefaka amin’ny fanjakana ny mpamatsy vola”, hoy ny AVG
Anisan’ny fepetra apetraky ny vondrona iraisam-pirenena mialoha ny fivoahan’ny famatsiam-bola, ny ady amin’ny kolikoly sy ny trafika harena voajanahary. Nilaza ny filohan’ny filakevi-pitantanana (PCA) ny Alliance voahary gasy (AVG), Razakamanarina Ndranto, fa anisan’ny voasoratra mazava ao anatin’ny Drafi-pirenena ho an’ny fampandrosoana (PND), ny fanjakana tsara tantana. Tafiditra ao anatin’izany ny ady amin’ny kolikoly sy ny fiarovana ny harena voajanahary.
Raha ny zava-misy anefa, nilaza ny tompon’andraikitry ny lafiny lalàna ao amin’ny AVG, Georg Jasper, fa “toa malefaka loatra ny vondrona iraisam-pirenena manoloana ny zava-misy sy ny fepetra raisiny, raha tarafina amin’ny amin’ny famatsiam-bolany. Tena faniriana ny hanasazin’ny fitsarana ny mpanao trafika ny harena voajanahary”.
Mifangaro ny asan’ny filoham-pirenena
Tsiahivina fa anisan’ny fepetra napetraky ny mpamatsy vola koa ny fahaleovantenan’ny fitsarana. “Olana anefa, mifangaro ny mpanatanteraka sy ny fitsarana, satria, filohan’ny mpanatanteraka ny filoham-pirenena, nefa filohan’ny filakevitra ambony ny fitsarana (Coseil supreme de la magistrature) koa”, hoy ihany i Georg Jasper.
Manao fanadihadiana ny Bianco, notohanan’ny loharanom-baovao nomen’ny AVG. Miandraikitra ny fanenjehana fitsarana ary mamoaka ny didim-pitsarana ny Chaîne pénale. Hatreto anefa, tsy misy mihitsy ny didim-pitsarana nivoaka, indrindra ny fanasaziana.